crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Habka tacliinta dadban ee koorsada la yiraahdo iyo aragtida ardayda | HimiloNetwork
Posted by: Zakariya in Wararka February 28, 2017	0 240 Views
Muqdisho (Himilonews) – Hab-tacliimeedka dadban waxay sanadihii tagay kusoo kordheen magaalada Muqdisho. Xarumaha ama dugsiyada bixiya habka tacliinta dadban ama fudud ee loo yaqaan Koorsada oo ah koobis iyo guud-mar lagu sameynayo manhajka sanad-dugsiyeed ee loogu tala-galay in lagu qaato sanad dhameystiran waxay noqdeen kuwa isasoo taraya dhawaanahan.
Waana talooyin u muuqda inay macno u sameyn Karaan da’yarka ku qanacsan koorsada iyo kan iska diidanba. Balse muhiimad ugu fadhin karta qof kasta oo naawilaya inuu wax-barashadiisa ku qaato hab-tacliimeedka dadban.
Previous: The effect of Somalia’s turning point on stability
Next: Tacliinta iyo Jaceylka iyo aragtida dhalinyarada